एसईईमा ग्रेड कम आए के गर्ने ? - Nayapulonline
काठमाडौं/ पुरानो एसएलसीको रिजल्ट सुन्ने बानी परेकाहरु एसईईको नतिजा आयो भन्नासाथ प्रश्न गर्छन्- यस वर्ष कतिजना पास भएछन् ? अनि कति विद्यार्थी फेल भएछन् ? तर, ग्रेडिङ सिस्टमले एसएलसीवालाहरुको पुरानो प्रश्नको सहज जवाफ दिँदैन । अर्थात यो प्रणालीमा विद्यार्थीलाई सीधै फेल भएको मानिँदैन । उनीहरु ग्रेडिङमा कम हुन सक्छन् । तर, ग्रेड सी वा सोभन्दा कम नम्बर प्राप्त गर्नेहरुले पूरक ग्रेडवृद्धिको परीक्षा दिन पाउँछन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भनेको छ, ‘नियमिततर्फ सैद्धान्तिक विषयको बढीमा २ विषयसम्म सी वा सीभन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गरेका वा दुई विषयसम्म अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीहरुले ग्रेडवृद्धिका लागि पूरक ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सामेल हुन सक्नेछन् ।’ पूरक ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका पछि प्रकाशित गरिने परीक्षानियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नतिजामा चित्त नबुझेमा सम्बिन्धत परीक्षार्थीले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने छ । यसका लागि प्रतिविषय ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । यसका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेशस्थित शिक्षा निर्देशनालय वा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र निवेदन दिन सकिने छ ।